China Thermal gel kudziyisa chivharo fekitori uye vagadziri | Huanyi
Zvinhu: jira satin rinoumba PVC unhani
Saizi: 47cm dhayamita, 600g
Ruvara: wenguva dzose pink, ruvara runogona kugadziriswa kana huwandu hwacho hwadarika 2000pcs
Usage: Mushure mekugeza sipo, zora kirimu yekubheka zvakaenzana, pfeka chivharo chekugezesa, uye pisa kapu yekubheka pane yepakati-yakanyanya kupisa mu microwave kwemaminetsi 2-3. Kana iyo tembiricha iri ingangoita 35-45 degrees, pfeka iyo kwemaminitsi gumi nemashanu. Inokodzera mvumo, yekuchengetedza-dhayi, uye yekuchengetedza bvudzi zuva nezuva.
Usage:Mushure mekugeza sipo, zora kirimu yekubheka zvakaenzana, pfeka chivharo chekugezesa, uye pisa kapu yekubheka pane yepakati-yakanyanya kupisa mu microwave kwemaminetsi 2-3. Kana iyo tembiricha iri ingangoita 35-45 degrees, pfeka iyo kwemaminitsi gumi nemashanu. Inokodzera mvumo, yekuchengetedza-dhayi, uye yekuchengetedza bvudzi zuva nezuva.
1. Makore gumi Chiitiko cheOEM, ODM, Yakasarudzika ruvara, logo, mapakeji. Unogona kukupa mazano ehunyanzvi pamusoro pekushandisa uye chengetedzo, kudzivirira kuvuza kana kuora.
2.Fekitori ine anopfuura makumi maviri ekugadzira Lines, UV yekudhinda muchina, Silkscreen semusangano inogona kusangana zvaunoda pane iyo logo, isu zvakare tsika bhegi rebasa pedu pachedu tinogona kurongedza ngowani yako zvakajeka.
4. Kune avo gel inopisa kapu diki saizi inogona kusimba inoita kuti isanzwisisike, fekitori yedu ine hukuru hwakakura hwakasiyana hwesarudzo yako, inogona kukwana vanhu vazhinji.
Pashure: Mugadziri weI Ice Packs Yekuzvarwa - Vana ice pack - Huanyi
Zvadaro: Pfudzi kuputira chando kurongedza
Kugadziridza Heat Cap
Kudzika Kwakadzika Kupisa Cap
Bvudzi perm cap
vhudzi rinovhara cap
Kushata Gel Cap
chivharo chevhudzi rakarara
Thermal gel chivharo
Thermal gel inopisa nharo